यी शक्तिशाली राशिहरु भएका ब्याक्ती हत्तपत्त केही कुरामा मान्दैनन् हार ! – Butwal Sandesh
यी शक्तिशाली राशिहरु भएका ब्याक्ती हत्तपत्त केही कुरामा मान्दैनन् हार !
एजेन्सी । हरेक मानिस आफुले गरिएको काममा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर सफल ति मान्छेहरु हुन्छन जोसंग निश्चित संकल्प र आत्मविश्वास हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रअनुसार जसको कुण्डलीमा तीन ग्रह शुभ स्थितिमा रहने गर्दछन्, उनीहरुलाई कुनैपनि काममा निराशा प्राप्त हुदैन । पहिलो शुभ ग्रह हुन्छ शनि, यस ग्रहको कुण्डलीमा शुभ स्थितिमा भए भाग्यले सधै साथ दिने गर्दछ ।
दोस्रो र तेस्रो ग्रह हुने गर्दछ मंगल र बृहस्पति। यी दिनहरुमा शुभ स्थिति व्यक्तिलाई सधै सफलता प्राप्त हुने गर्दछ । १२ राशिहरुमध्ये ३ राशि यस्तो हुने गर्दछन् जो कुनैपनि अवस्थामा पनि हार मान्दैनन् । यी तीन राशिहरु धन, सुख(समृद्धि र आफ्नो जीवनमा प्रतिष्ठा बनाउनमा सधै सफल रहने गर्दछन् ।
मकर राशि : यो राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो क्षमताको कारण उच्च पद प्राप्त गर्नमा सफल हुने गर्छन्। शनि र मंगलको विशेष कृपा यस राशिको मानिसहरुमा रहने गर्दछन्। यस राशिको व्यक्तिहरु आफ्नो मिहिनेतको कारण धन, मान-सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नमा सफल हुने गर्छन् । यस राशिको व्यक्तिहरु जुन कामको पछाडि लाग्दछन् त्यसलाई पूरा गर्नको लागि पुरै मिहिनेत गर्ने गर्दछन् । यिनीहरुको यही खूबी सबैभन्दा ठुलो पूजी हुन्छ ।